အကျင့်ဆိုးတွေ ရှိနေတာလား – Live the Dream
ဟိုတနေ့က ကိုဇဏ်ခီ post လေး တစ်ခုတင်ထားတာတွေ့တယ် အလုပ်ပြီးမြောက်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပျော်ရင်လုပ်မယ် မပျော်ရင်မလုပ်ဘူးဆိုပြီး အလွယ်တကူပဲဝင်လွယ်ထွက်လွယ်လုပ်ကျတယ် ကိုယ်တာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်ကိုလည်း ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ working attitude လည်း မရှိကြသလို အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဘာရည်ရွယ်ချက်မှလည်းမရှိတော့ ထစ်ခနဲဆိုတာနဲ့ ထွက်လိုက်ကြတာပဲတဲ့ အလုပ်ပြီးမြေက်အောင်လုပ်ပြီးဂုဏ်ယူရမည့်အစား အလုပ်ဘယ်နှခုကနေ ဘယ်လိုမကြိုက်ရင်ထွက်ခဲ့တာဆိုပြီး တလွဲဂုဏ်ဆာနေကြတယ်…
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်ခွင်တော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတဲ့ မှားယွင်းတဲ့အပြုအမူတွေ ခံယူချက်တွေ ကအများကြီးပါ ..ဘယ်ထိအောင်ဆက်မှာ းနေကြမလည်း…
စင်ကာပူကိုမှီချင်တယ် အဆင့်အတန်းမှီမှီနေချင်တယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ညာဖြစ်ချင်တယ်..စုံနေတာပါပဲပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ပြုမှုကျင့်ကြံနေတာက တကယ်တလွဲ…ကျွန်တော်တို့မပြင်တော့ဘူးလား..ဒီအတိုင်းပဲ အရာရာမှာ နိမ့်နိမ့်ကျကျနဲ့နေပြီး ေသေသွားကြတော့မှာလား…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကျန်ဘဝတွေအတွက် နောင်လာမည့် မျိုးဆက်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ကစ ပြင်ကြရအောင်လား…
ဒါကြောင့်မလို့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပဲလုပ်လုပ် ၊ သူများဆီမှာပဲလုပ်လုပ် ၊ အောက်ခြေသန့်ရှင်းရေးပဲလုပ်လုပ် ၊ ရာထူးကြီးတဲ့နေရာမှာပဲလုပ်လုပ် …အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူမှန်သမျှ ၊ အခုမှ စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နဲ့ အလုပ်ခွင်ကို ပထမဆုံးဝင်ကြမည့် လူငယ်မှန်သမျှ အလုပ်ခွင်မှာ မလုပ်သင့်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူ ၊ ခံယူချက်တွေကို သိထားဖို့လည်းလိုသလို …မလုပ်မိအောင် စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေနဲ့ ထိန်းသိမ်ကျင့်ကြံဖို့လည်း အရေးတကြီးလိုနေပါပြီ….
အောက်မှာ မလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေကိုလည်း ဖော်ပြထားသလို ကိုဇာဏ်ခီရဲ့ post link ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တော်တော်များများက အပေါ်ဆုံးအချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းပြုမူနိုင်ကြပြီး အောက်ဆုံးနှစ်ချက်မှာတော့ သိသိကြီးကြီးနဲ့ မပြင်နိုင်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ သင်ရော အောက်ဆုံးက အကျင့်ဆိုး နှစ်ခုကို မလုပ်ဘဲ ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာနေနေတာလား ?
မင့်လစာဘယ်လောက်ရလို့လည်း…မင်းကဘာမလို့ငါ့ကိုပြန်ကြည့်တာလည်း…လူကြည့်တော့ စာရေးအလုပ်ကမတတ်ဘူး….မင်းတို့ဘာသာကလူတွေ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်…စသည်ဖြင့်
ရာထူးအဆင့်အတန်း နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာ ၊ ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာ ၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံတာ စသည်ဖြင့် တဖက်သားကို နှိမ်ချခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ တကယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။
အမုန်းပွားစေပါတယ်။ ယုံကြည်မှုပျက်စီးစေပါတယ်။ အသင်းအဖော်စိတ်ဓာတ်ပျက်ဆီးစေပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုမျိုး မပြုမှုဖို့လိုသလို အဲ့လိုပြုမှုနေတာတွေ့ရင်လည်း အငြိမ်မနေသင့်ပါဘူး။ အပြောခံ အနှိမ်ခံနေရတဲ့သူဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည် ပေးရပါမယ်..ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုလက်မခံကြောင်းပြသရပါမယ်…။
၂။ နောက်ကွယ်မှာ အတင်းပြောခြင်း ၊ ကောလဟလ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ ဖြန့်ဝေခြင်း ၊ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့အားနည်းချက်အကြောင်းကို သူ့ရှေ့မှာ ပြောတာက ဝေဖန်တာဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှာပြောတာကတော့ အပြစ်တင်အပုတ်ချတာ ဖြစ်သွားပါပြီ ။အတင်းတုတ်တာဖြစ်သွားပါပြီ။သွေးခွဲတာဖြစ်သွားပါပြီ…။ဘယ်လောက်ပင်ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါစေ နောက်ကွယ်မှာ ကောလဟလတွေပြောတဲ့သူ အပြစ်တင်အပုတ်ချပြောတဲ့သူတွေရှိရင် တကယ်ကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်း မပြောပါနှင့်..အရပ်ထဲကစကား အရပ်ထဲမှာထားခဲ့ပြီး အလုပ်ခွင်ကစကားကိုလည်း အလုပ်ခွင်မှာပဲ ထားခဲ့နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ။
၃။ တာဝန်မယူတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုး
တစ်ခုခုကောင်းတာဆိုရင် ကိုယ်မလုပ်ဘဲနှင့် ကိုယ့်နာမည် ပါချင်ကျပြီး…ကိုယ်ကြောင့်တစ်ခုခုအမှားအယွင်းဖြစ်သွားရင်ကျတော့ တာဝန်မယူတတ်တာကလည်း တကယ်ကို အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့အပြုအမူပါ။ ကိုယ်စလုပ်ခဲ့တာကို အဆုံးထိတာဝန်ယူရပါမယ်။ အဆုံးထိရောက်အောင်လည်း လုပ်ရပါမယ်။ ကိုဇဏ်ခီပြောသလိုပါပဲ။
အလုပ္ၿပီးေျမာက္ျခင္းရဲ႕တန္ဖိုးကိုယ္တာဝန္ယူၿပီးလုပ္တဲ့အလုပ္တစ္ခုၿပီးေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ဘယ္သူ႔အတြက္မွမဟုတ္ဘူး။…
Posted by Zenn Kyi on Wednesday, March 13, 2019
၄။ Money-Oriented Working Attitude
ဝင်ငွေတစ်ခုရဖို့ အလုပ်လုပ်ကြတာမှန်ပေမယ့် အဲ့ဒီပိုက်ဆံကိစ္စကိုပဲ အလေးထားနေလို့မရပါဘူး။
လစာကောင်းရင်ကောင်းကောင်းလုပ်မယ် ၊ မကောင်းရင် ခိုလုပ်မယ်ဆိုတာ တကယ်ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့စိတ်ဓါတ်ပါ။
ကိုယ်မှ လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးရင် အကောင်းဆုံးသာလုပ်ပေးပါ …။အလုပ်ကိုချစ်မှ အလုပ်ကလည်းချစ်မှပါ။
လလယ်လောက်ရောက်ရင် လုပ်ချင်သလိုလို ၊ မလုပ်ချင်သလိုလို ပျင်းတွဲတွဲလုပ်နေတာတွေက ပိုက်ဆံကိုဦးတည်နေလို့ပါ။ ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်နေရနေရ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လို့တွေးပြီး ကိုယ်ရှိသမျှစွမ်းအားအကုန်သာသုံးလိုက်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုးတက်လာရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်မှုကိုလည်း တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ အထောက်အကူပြုလာမှာပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ရဲ့အထက်လူကြီးကမကောင်းရင်တောင် “ ငါလုပ်နေတာ သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ငါ့နိုင်ငံအတွက် ငါတို့အနာဂါတ်အတွက်လုပ်နေတာလို့ နှလုံးသွင်းပြီး အကောင်းဆုံးသာလုပ်ပေးပါ”
ဘာဆိုဘာမှ ပြောလို့မရ ၊ ထောက်ပြလို့လည်းမရ ၊ ဝေဖန်လို့လည်းမရ ..ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသတွေတရှူးရှူးထွက်ပြီး….အလုပ်လုပ်နေတာ အိမ်မှာလိုမျိုး ကလေးဆိုးကြီးလို ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်နေလို့မရပါဘူး….။အထက်လူကြီးက စကားလေး နည်းနည်းမာလိုက်ပြီဆိုတာနှင့်
မကောင်းဘူးဆိုပြီး နောက်ကွယ်မှာအတင်းတုတ်တာတွေ ၊ အသားလွတ်မုန်းနေတာမျိုးတွေက ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အထက်လူကြီးပြောတာက ဘယ်လောက်မှန်လည်း ၊ တကယ်လို့ အထက်ကတမင်နှိမ်ပြောနေတယ်လို့ခံစားရရင်တောင် သည်းခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရင့်ကျက်မှုကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်ပြောပြီး ပြတတ်ရမှာပါ။ ဆန်းဆန်းတင့် ဖြစ်နေတာက ဘယ်အချိန်မှာမှ မကောင်းပါဘူး။
၆။ အိမ်သာအကြာကြီးတတ်ပြီး အချိန်ခိုးတဲ့အကျင့်ဆိုး
အိမ်သာနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို ချောင်းပေါက်အောင်ကူးနေတာမျိုး..၊တစ်ခါသွားရင် တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာပြီး အထဲမှာ ဖုန်းခိုးသုံးနေတာမျိုးတွေက တကယ်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ တကယ်ဝမ်းသွားနေလို့ သွားတာမျိုးက ကျန်းမာရေးအရ သွားရမှာပါ။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး အိမ်သာသွားလိုက် ရေသောက်လိုက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးကို ပြင်ရပါမယ်။
၇။ အမြဲအချိန်နောက်ကျတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုး
တကယ်တော့ ရုံးချိန်ဆိုတာ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်လောက် စောရောက်နေသင့်တာမျိုးပါ။ ကြိုကြိုတင်တင် ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လုပ်ပြီး ရုံးချိန်ကိုတော့ မှီအောင်လာသင့်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်နောက်ကျရင်တောင် အားနာစရာကောင်းပါတယ်။ မလေးစားရာရောက်ပါတယ်။ ရုံးကိစ္စမှာမှ မဟုတ်ဘူး အပြင်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်း ဘယ်တော့မှ နောက်မကျသင့်ပါဘူး။ လူတိုင်းက တစ်မိနစ်ကလေးနောက်ကျရင်တောင် တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆိုရင် အများကြီးပါ။ အချိန်ကိုလေးစားပြီး အလုပ်ကြိုးစားရင် ဂျပန်နိုင်ငံလို အမြန်တိုးတက်လာမှာပါ။